Mobile Marketing - Mitatitra ny hevitra amin'ny Semalt
Tonga amin'ny revolisiona ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika ny teknolojia finday. Afitaovana izay nampiasaina tamin'ny fotoana tsy nampiasana afa-tsy ny fiantsoana an-tariby sy ny fandefasana hafatra an-tsoratra dia loharanom-baovao maro samihafa momba ny toetrandro,vaovao, fialamboly ary ny fanatitra hafa rehetra amin'ny aterineto. Fotoana fotsiny ny fotoana mandra-pahatongan'ny fandefasana entana mankany amin'ny fitaovana finday. Amin'izao fotoana izao dia mihodikodina tanteraka ny orinasa, mitarika ny firoboroboan'ny varotra ho an'ny ankamaroan'ny orinasa madinika.
Ho an'ny mpivarotra antsinjarany, dia zava-dehibe tokoa ny hahafantarana tsara ny teknolojian'ny finday aryMitadiava fomba iray hampiasana tanteraka ny tombontsoany. Ny famoronana tetikady tsara ho an'ny varotra finday dia mila fahatakarana goavana ny safidy ianao dia mahazo ny mpanjifa mifampiraharaha miaraka aminao amin'ny findainy - chile vacation sites. Raha vao azonao ny endriky ny fivarotana finday, ianaodia ho fiatrehana ny fifaninanana.
Ivan Konovalov, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia mamaritra ny fomba hampiroboroboana ny varotra amin'ny alàlan'ny finday.
Marketing techniques tokony hianaranao
Na manao ahoana na manao ahoana ny fivarotana fivarotana, dia mora ny mahita vokatra iray raha fantatrao hoe ahoana izanyantsoina hoe. Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny mijery izany ao amin'ny tranonkala, na mpiasa iray izay hitarika anao amin'izany. Na dia izany aza anefa, dia mihitsoka ny fahatsoran'ilay izy raha tsy azonao antoka izay tena tadiavinao. Miaraka amin'ny vokatra maro azo avy amin'ny mpivarotra ety anaty aterineto, dia lasa fanamby izanyfind it..
Ity no ahitàna ny fikarohana mitranga. Ao amin'io tranga io, ny fampiharana na ny tranonkala dia afaka mandrayireo tarehintsoratra vitsivitsy voalohany heverinao ary manome anao safidy samihafa. Miaraka amin'ny fikarohana mitombina, ianao dia manana safidy tsara kokoaMivadibadika amin'ny vokatra tianao hividy. Tena fitaovana tena sarobidy izy satria ny ankamaroan'ny mpampiasa finday dia tsy te hanao asa be dia be.
Ankoatra ny fikarohana azo antoka dia misy fomba hafa hitarihana ny mpanjifa ho anao aloha.Ny fomba tsara indrindra anaovana izany, mazava ho azy, dia ny mamela azy ireo mandefa ny rindrambaiko sy mividy ny vokatra atolotrao. Ny tetika tsara indrindra manaraka dia mitarikany fikarohana amin'ny Internet ho an'ny tranonkalanao alohan'ny tranonkala hafa manome tolotra mitovy amin'izany. Nahomby izany tamin'ny alàlan'ny fanadiovana.Raha manao izany ianao, dia hahazo toky amin'ny kliokao misimisy kokoa ary noho izany dia mitombo ny varotra.
Ankehitriny, ireo lafiny izay fijery voafetra amin'ny vokatra iray, toy ny katalaogy taratasytany. Ankehitriny, ny fetra tokana dia ny drafitra momba ny angon-drakitra, izay mora mora amin'ny wifi. Noho izany dia afaka mandinika ny mpivarotraToa tsy hita isa ny sary eo amin'ny telefaoniny, toy ny olona.
Vokatr'izany, ny mpividy dia tsy manam-potoana intsony mba hitandrina. Afaka mijery ireo vokatra izy ireoAvy amin'ny lafiny rehetra, mora sy haingana. Izany dia miantoka fa tsy voatery miahiahy ny amin'ny fanantenana hafahafa izy ireo rehefa navoaka ny vokatra.
Ny marketing amin'ny fampiasana finday dia tsy toy ny kely kokoa sy tsotra kokoa amin'ny fivarotana ho an'ireo mpampiasa solosaina manokana. Manana fiheverana miavaka manokana izy miantso teknikam-pampianarana manokana. Raha vao mampihatra izany ianao dia hoMankafy ny tombontsoa tsy ho ela.